Xiaomi Amazfit Ares mijery: famolavolana, endrika ary vidiny | Androidsis
Na dia marina aza fa ny fizarana telephony an'ny mpanamboatra Aziatika dia iray amin'ireo mpifaninana lehibe indrindra aminy, ny fianakavian'ireo akanjo azo entina dia tsy dia taraiky mihitsy. Efa nahita firavaka vitsivitsy izahay, toy ny Amazfit T-Rex, smartwatch ivelan'ny arabe ho an'ireo tia fanatanjahan-tena. Ary ankehitriny, manana a fiambenana Xiaomi vaovao.
Miresaka momba izany isika Amazfit Ares, maodely iray izay mirehareha amin'ny endri-javatra sy famolavolana tena manintona, ary koa ny sandan'ny vola izay, indray mandeha, dia hahatonga an'ity Xiaomi ity hijery baomba mpivarotra tena izy.
Volavola sy toetra mampiavaka ny fiambenana Xiaomi Amazfit Ares
Amin'ny ambaratonga hatsarana dia mahita maodely izay mirehareha amin'ny aliminioma sy ny famaranana ABS hanome ity fanoherana vaovao Xiaomi vaovao fanoherana mahery vaika ny hatairana. Mazava ho azy, tsy toy ny T-Rex, ity maodely ity dia tsy manana fanamarinana ara-tafika, saingy manana fanoherana rano, pAfaka manondrika ny Amazfit Ares hatramin'ny 50 metatra.
Ny efijery dia iray amin'ireo singa mahaliana indrindra, miaraka a tontolon'ny octagonal misaotra ny frame izay ahitantsika ny bokotra samihafa amin'ny famantaranandro. Ary mitandrema amin'ny tontolony miovaova, hanomezana fanjifana angovo faran'izay kely. Ny vokany? Mirehareha amin'ny fahaleovan-tena amin'ny haavony ny efijery 1.28-inch azy.
Mihoatra noho ny zava-drehetra satria i Amazfit dia nanome toky fa azo ampiasaina io hahatratra tapa-bolana hampiasana hatramin'ny 200 mAh. Ary izany dia miaraka amin'ny karazana fampiasa rehetra izay hahafaly ireo mpampiasa atletisma indrindra. Hanomboka amin'ny firesahana momba ny fanekena fanatanjahantena 70 isan-karazany isika, ao anatin'izany ny mandeha an-tongotra, bisikileta, milomano, haiady, dihy… Andao, samy hafa be ny safidy.
Etsy ankilany, araka ny nampoizina, manana karazana sensor rehetra izy, mba hahafahanao mandrefy ny tahan'ny fitempon'ny fonao, manana barometre ary koa GPS + GLONASS. Mazava ho azy, amin'ny alàlan'ity singa ity no iasana, ny bateria fiambenana xiaomi vaovao hahena ho 23 ora io. Saingy mbola endrika mahamenatra ho an'ny maodely karazana io.
Mikasika ny daty fandefasana sy ny vidiny, amin'izao fotoana izao dia tafidina any Shina izy amin'ny vidiny 499 yuan, sahabo ho 65 Euros hanova ny endriny tokana miaraka amina dial 46 mm ary misy loko mainty sy maintso. Ilaina ny mijery raha toa ka mandefa ity maodely ity any Espana izy ireo, satria mazava fa tena ho voadona izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Amazfit Ares, ity no famantaranandro Xiaomi vaovao miaraka amin'ny bateria tsy mety ritra
Ahoana ny fampiasana efitrano Messenger, antso an-tsary amin'ny vondrona olona hatramin'ny 50
Ahoana ny fomba hampitomboana na hampihenana ny haben'ny sary masina ao MIUI